किन ढिलाइ प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानी तोक्न ? – Everest Dainik
किन ढिलाइ प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानी तोक्न ?
काठमाडौं, जेठ ३१ । प्रदेशको नामाङ्कन र राजधानीको विषय टुंगो नलगाउँदा प्रदेश ४ को प्रदेशसभा बैठकमा झडप नै भयो ।
नामाङ्कन र राजधानीका बारेमा पेश भइसकेको विधेयकमाथि छिटो छलफल गर्नुपर्ने माग गर्दै प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसदले संसद अवरुद्ध पार्न खोज्दा झडपको अवस्था आएको थियो ।
नाम र राधजानीका विषयमा अनेक चर्चा चल्ने गरेको भएपनि अहिलेसम्म औपचारिक छलफल भने नभएको कांग्रेसका नेता राजु कोइरालाले बताउनुभयो । यो प्रदेशमा पहाडमा किरात समुदाय अर्थात राई र लिम्बु समुदायको ऐतिहासिक थातथलो छ । तराईले कोच समुदायको इतिहास बोकेको छ ।
त्यसैले अहिले नाम के राख्ने भन्ने टुंगो छैन । त्यस्तै, सर्वोच्च शिखर सगरमाथा र देशकै सवैभन्दा ठुलो नदी सप्तकोशी पनि यही प्रदेशमा पर्ने भएकाले नाम सगरमाथा, सप्तकोशी वा कोशी हुनुपर्छ भन्ने माग पनि छ ।
यद्यपी, अहिले सेती महाकाली थरुहट प्रदेश, खप्तड प्रदेश, मानसखण्ड प्रदेश र डोटी प्रदेश नाममाथि पनि आन्तरिक छलफल भने भइरहेको उहाँले बताउनुभयो । प्रदेश राजधानी धनगढी नै राख्न लगभग सबै दल सहमत रहेकाले नामपनि सहमतिकै आधारमा राख्ने सांसदहरु बताउँछन् । औपचारिक रुपमा संसदमा छलफल सुरु भएपछि नाम र राजधानी सहजै टुंगो लाग्ने कानुन मन्त्री शाहले दावी गर्नुभयो । –उज्यालो अनलाइन
ट्याग्स: Province 1, Province 3, Province 5, Province 7, Province-2